Shiina: Shirweynihii 19aad & Xi JinPing oo gali doona Xeerka Xisbiga – Kasmo Newspaper
Shiina: Shirweynihii 19aad & Xi JinPing oo gali doona Xeerka Xisbiga
Updated - October 18, 2017 11:14 am GMT
London (Kasmo ), Shirweynihii 19aad ee Xisbiga Shuuciga ayaa si rasmi ah uga soconaya bartamaha Pekin iyada oo Madaxweyne Xi JinPing hadal u jeedinayo 2287da ergo ee matalaysa in ka badan 89ka malyuun ee xubnaha xisbiga.
Khudbadda Xi waxaa laga dheehan doonaa, sidii caadada ahayd, hal-kudhigyadii looga bartay hoggaanka sare ee Shiinaha muddooyinkii u dambaysay oo xoogga lagu saarayo sidii Shiina looga dhigi lahaa “bulsho barwaaqo ah” sannadka 2020ka gudihiisa. Taas oo macnaheedu yahay dad gaaraya 30 malyuun oo hor leh in laga saaro saboolnimada iyo dibu-dhaca dhaqaale.
Afhayeenka Shirweynaha ayaa shaaca ka qaaday in muddada kulanku socdo lagu samayn doono dib-u-eegis Xeerka Xisbiga, kaas oo lagu dari doono waxqabadka Xukuumadda Madaxweyne Xi JinPing. Dadka u kuurgala arrimaha Shiina ayaa is weydiinaya qaabka arrintaasi u dhiuci doonto iyo haddii magaca Madaxweynaha si cad loo raacsiin doono iyo in kale, siyaasadihii iyo waxqabadkii uu la yimid.
Ilaa hadda, Mao Zedong, aasaasihii Jamhuuriyadda iyo hoggaamiyihii Deng Xiaping, ee albaabada u furay Shiinaha ayaa noqonaya 2da Madaxweyne iyo Xoghaye Guud ee qur ah oo magacooda lagu xusay Dastuurka Xisbiga Shuuciga.
Kuwii iyaga beddelay, Jiang Zemin iyo Hu Jintao, midkoodna lama magac dhabin, in kasta oo waxqabadkoodii lagu xusay Xeerka Xisbiga.
Sida dad badani qabaan, Xi JingPing waxaa laga yaabaa in uu nqodo hoggaamiyihii 3aad ee Shiina oo si cad magaciisa oo la socda barnaamijkiisii siyaasadeed lagu xuso Xeerka Xisbiga.
Arrimaha uu ku faani karo waxaa ka mid ah ololihii la dagaallanka musuqmaasuqa oo lagu xaaqay kumannaan shaqaale ah, loogana takhalusay qaar badan oo caqabad ku ahaa xisbiga. Dhanka arrimaha gudaha wali waa sidoodii dabaylihii ka dhacayay hareeraha Jamhuuriyadda, sida Tibet, Xijiang, Taiwan iyo dhaqdhaqaaqa dimuqraadiga ah ee Hong Kong.
Laakiin dib u curashada Shiina waxay ku imanaysaa xitaa tillabada Xi ee kaalinta caalamiga ah ee Shiinaha, wali lama arag Madaxweyne sidiisa oo kale u firfircoon, isaga oo muddo gaaban isugu maray Latin America, Bariga Dhexe, Afrika iyo Asiyada Dhexe.
Qodobka udub-dhexaadka u ah siyaasadda Arrimaha Dibadda Pekin waa dhismaha shabakad kaabayaal ah oo isku xiraysa Qaaradaha Yurub iyo Asiya, taas oo u sahashay Shiina xoojnta xiriirka dalalka Gobolka oo ay ku jiraan bahwadaagta Maraykanka ee Asia.
Xi JinPing waxaa Xoghayaha Guud ee Xisbiga loo doortay bishii Nofembar 2012kii, xilka Madaxweynahana bishii March 2013kii, kaas oo ku xadidan 2 wareeg oo qur ah. Laakiin muddada xilka Xoghayaha Guud ee Xisbiga waa ka badantahay 2 wareeg oo doorasho ah, in kasta oo ayan waligeed dhicin, wixii ka dambeeyay Mao Zedong.